डा.केसीको फेरि सरकारलाई दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् । आज विहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरिएको छ...
जगत विष्ट अछाम । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका महिलाहरुलाई सेनिटरी प्याड उत्पादन तालिम सुरु भएको छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ले गरी प्याड उत्पादन गर्ने तीन दिने तालिम आइतबारदेखि सुरु भएको हो । छाउपडी प्रथाबाट प्रभावित नगरका महिलाहरुलाई नौ वटा समूह बनाएर तामिल दिन लागिएको छ । यो तालिमले महिलाहरुलाई महिनावरी हुँदा सुरक्षित बनाउको...
उपमेयरलाई हृदयघात, नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुँदै
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई हृदयघात भएको छ । बिहीबार राति हृदयघात भएपछि अहिले काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उनको उपचार भईरहेको महानगरपालिकाका १६ नं वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । खड्गीका सहयोगीहरुका अनुसार उनको स्वास्थ्य सुधार हुने क्रममा रहेको छ। बिहीबार राती उनलाई हृदयघात पछि अस्पताल...
यस्तो छ नयाँ स्वास्थ्य नीति
– विष्णु नेपाल काठमाडौं । संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजानिक गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास, विस्तार र सुधार, सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको...
– तारानाथ आचार्य बागलुङ । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–५ खुंखानीकी २९ वर्षीया नरदेवी सिर्पाली स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा भेटिनुभयो । सन्तानको रहर पुगेपछि एक वर्ष पहिले हातमा लगाएको इम्प्लान्ट निकाल्न उहाँ खुंखानी स्वास्थ्य चौकी पुग्नुभएको हो । एक छोरा र दुई छोरीकी आमा उहाँले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरु प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ...
लसुन र मह मिलाएर खाए स्वस्थ्यका लागि अमृत समान
काठमाडौं । लसुन र महको बारेमा जानकारी नहुने सायदै कमै होलान् । हरेक दिन हाम्रो भान्सामा लसुन मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । लसुन मसलामात्रै नभएर यो भान्साको औषधि पनि हो । यसले शरीरका अनेक विकारलाई शुद्धीकरण गरेर अनेक खाले इन्फेक्सन कम गर्नसमेत सहयोग गरिरहेको हुन्छ । लसुनले मानिसको पाचनक्रियालाई समेत फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । बनाउने...
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लाको एक स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानीको समस्या हुँदा सुत्केरीसेवा प्रभावित बनेको छ । जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका–१० राईस्थित सहस्रलिङ्ग स्वास्थ्य चौकीमा आपूर्ति हुँदै आएको खानपानीकोे मुहान सुकेर पानीको सतह कम भएपछि खानेपानीको चरम अभाव भएको हो । स्वास्थ्य संस्थामा नै खानेपानी अभाव हुँदा सुत्केरी सेवासँगै...
‘ब्लड बैंक’ मा फ्रिज अभाव हुँदा समस्या
दाङ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा रहेको कालिकादेवी रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगत सङ्कलन गर्न आवश्यक फ्रिज अभाव रहेको छ । फ्रिज नहुँदा आवश्यकतानुसार रगत सङ्कलन गर्न नसकिएको केन्द्र प्रमुख सीतम रेग्मीले बताउनुभयो । “एउटा मात्रै फ्रिज छ, त्यसमा थोरै मात्रै रगत सङ्कलन गर्न मिल्छ, तर एकैपटक धेरै रक्तदाता आएमा रगत सङ्कलन गर्न सक्ने...
कुष्ठरोग नियन्त्रणमा नयाँ अभियान: सम्पर्कमा रहनेलाई पनि औषधि
– काशीराम शर्मा कुष्ठरोग नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ अभियान अघि सारेको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त अभियान यस वर्षदेखि बाँके र बर्दियामा पनि सञ्चालन भएको छ । कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले वर्षौँदेखि ठूलो रकम खर्चिँदै आए पनि सङ्क्रमितको दर निरन्तर उस्तै देखिएपछि नयाँ अभियान...
काठमाडौं । मेट्रो रेडियोलोजी एण्ड इमेजिङ प्रालि (एमआरआई सेन्टर( ले सरकारी दरभन्दा सस्तोमा रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको छ । विसं २०५६ देखि रेडियोलोजीअन्तर्गतका एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान र एमआरआई सेवा निजीस्तरबाट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सेन्टरका प्रशासकीय अधिकृत रवीन बस्न्यातले एमआरआई सेवा रु सात हजार, सिटी...
दैनिक मनहरीमा झाडाबान्ताको प्रकोप, बिरामीको संख्या बढ्दो
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको दुई वटा वडामा झाडाबान्ताको प्रकोप फैलिएको छ । गाउँपालिकाको ८ र ९ नम्बरको सिमपानी तथा ज्यामिरे क्षेत्रमा एक हप्तादेखि झाडाबान्ता फैलिएको हो । वडा नम्बर ९ मा एक साताअघि केही व्यक्तिलाई सामान्य पखालाको समस्या देखिएको र त्यसको केही समयपछि ८ र ९ नम्बर वडामा क्रमिक रुपमा बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि...
ग्लोबल विजनश क्लेजद्वारा निःशुल्क आखाँ शिविर सम्पन्न
पर्सा । ग्लोबल विजनश क्लेजको आयोजनामा आज निःशुल्क आखाँ शिविर समपन्न भएको छ । वीरगंजको नेशनल ट्रेडिङ्ग अगाडी क्लेज परिसरमा आयोजित शिविरमा अभिभावक, विद्यार्थी, सर्वसधारण र शिक्षक गरी एक सय ७० जनाले आखाँ चेकजाँच गराएको क्लेजका प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम दासले बताए । डा. अरुण यादव, प्राविधिक आशा जैशवाल, अन्जना घिमिरे र राजेश चौधरीको...
बर्दियामा सुस्त श्रवण भएकी बालिका पढ्नबाट वञ्चित
बर्दिया । बढैयाताल गाउँपालिका–४ खैरेनीकी १० वर्षीया राधा पासी चाहेर पनि विद्यालय भर्ना हुन नपाउँदा शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएकी छिन् । घर नजिकको विद्यालयले सुस्त श्रणव शक्ति भएको भन्दै भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको बालिकाका बुबा राधेश्याम पासीले बताउनुभयो । राधाको उमेर पाँच वर्ष पुग्ने बित्तिक्कै बुबा राधेश्याम पासीले नजिकैको ज्ञानदोय...
बाँके । बाँकेको सदरमुकाममा रहेको भेरी अस्पतालबाट निस्कने फोहरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक प्लान्ट नहुँदा उपचारका लागि आउने बिरामी तथा कुररुवालाई समेत संक्रमण हुने सम्भाबना छ । फोहर व्यवस्थापनको अध्ययन गर्न मानव अधिकारबादी संस्था तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल ‘थर्ड...
भक्तपुर । वीर अस्पतालपछि दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालको सबै सेवा ठप्प पार्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर ३५ कर्मचारीहरु अस्पतालको प्राङ्गणमा धर्ना दिएर बसेका छन् । सधँै भीड लाग्ने अस्पताल आन्दोलनका कारण बिरामी नआएपछि सुनसान...